INkosana encinci: ukhetho lokuqalisa umntwana wakho ekufundeni | Uncwadi lwangoku
INkosana encinci: ukhetho lokuqalisa umntwana wakho ekufundeni
UJuan Ortiz | | Iincwadi, Ezahlukeneyo
Umzekeliso weNkosana encinci.
INkosana encinci lukhetho olukhulu ukuqala ukufunda. Abantwana abafunda besebancinci- phakathi kweminyaka emi-2 ukuya kwesi-5 ubudala-bathanda ukwenza ngcono ezifundweni. Kananjalo, ngokufunda, bafumanisa iindlela zokuzonwabisa ezintsha, bathambekele ekuphuhliseni amandla okucinga asebenzayo nasempilweni, ukucinga okungcono, kunye nokufunda ukunxibelelana ngokufanelekileyo.
Iincwadi zamabali amafutshane, ezinemifanekiso ephumayo kunye nemifanekiso enemibala, zezona ndlela zilungileyo zokuqalisa ukufunda. Ezi zinto zenza kube lula ukuba abantwana bahlale begxile ebalini. Inye into enokunceda ukwenza ukufunda kube mnandi ngakumbi kukulinganisa ibali xa sele ligqityiwe. Ngokulandelanayo, umntwana ofunda ezi ntlobo zamabali amafutshane uya kudityaniswa ngakumbi ebalini, Uya kuphuhlisa ukuqonda okungcono kokufunda kwaye ubone ixesha lokufunda njengomdlalo.
1 Inkosana encinci
2 Inyathelo lesibini ekufundeni kwabantwana
3 Ukufunda uselula: esona sipho silungileyo somntwana
Umgaqo ubhalwe ngamaFrentshi UAntoine de Saint-Exupéry (Ngo-1900-1944). Yapapashwa okokuqala ngowe-1943, ngesiNgesi nangesiFrentshi. Okubangela umdla kukuba, ayizange iguqulelwe okanye ipapashwe ngeSpanish de kwayi-8 iminyaka kamva, kwi-1951.
Namhlanje iguqulelwe kwiilwimi nakwiziyelelane ezingaphezu kwama-250, kubandakanya inkqubo yokufunda yeBraille. Yeyona yeencwadi zibalaseleyo zenkulungwane yama-XNUMX eFrance kwaye yenye yeencwadi ezithengisa kakhulu ngalo lonke ixesha, Ukufikelela ngaphezulu kwesigidi sentengiso ngonyaka.
Inyathelo lesibini ekufundeni kwabantwana
Njengokuba amandla okufunda omntwana esiya esanda, uyakufuna imiceli mngeni emitsha, iincwadi ezinje ngeNkosana eNcinci zilulwazelelo olukhulu. Le noveli imfutshane ilungele abantwana abaneminyaka emi-5 nangaphezuluKubhaliwe ngokwembono yeNkosana encinci, umntwana, ke kuya kuba lula kakhulu ukuba usana ludibane nomlinganiswa kunye nebali.
UAntoine de Saint-Exupéry, umbhali weNkosana eNcinci.
Eminye imixholo ekhoyo bubuhlobo, intsingiselo yobomi, ilahleko nothando. Ezi zinto zenza ukuba olu khetho lufundwe kakuhle ukuba lwabelane nosapho kwaye luya kuba nokutolika okwahlukileyo ngokuxhomekeke kubudala bomfundi. Oku kuluncedo lokuba ukutolikwa okungafaniyo kungaxoxwa ngako, inkwenkwe efunda le ncwadi yomeleza amaqhina osapho lwakho, ukuguqula ukufunda kube ngumsebenzi wentlalo.
Ukufunda uselula: esona sipho silungileyo somntwana
Ukufunda, nokuba ungakanani na ngeminyaka, kuyonwabisa. Ukuphuhlisa izakhono eziza kwenza kube lula ukumelana neengxaki zemihla ngemihla, ukuvula umhlaba ongaziwayo, ukuphucula ukubhala kunye nopelo, nokwandisa isigama. Ukwazisa umntwana wakho kweli hlabathi kwangoko sesona sipho simnandi onokumnika sona, kwaye ukuba isesandleni se Inkosana encinci, iziphumo ziya kuba zininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » INkosana encinci: ukhetho lokuqalisa umntwana wakho ekufundeni
Iqela lokulwa likaChuck Palahniuk